Computer Technical Notes & Sharing Softwares: February 2012
မြန်မာနိုင်ငံ Y Talk အသုံးပြုပုံ
Net Cut သုံးပြီး Hack မယ်
Chat in MS-DOS using IP address
အဆင့်(၁) ။ ။ ပထမဆုံး အသုံးပြုမည့် user များသည် မိမိတို့ စတင် အသုံးပြုမည့် VoIP Account Card ကိုဝယ်ယူရပါမည်။
အဆင့်(၂) ။ ။ VoIP Account Card ၀ယ်ယူပြီးသည့် user များသည် အသုံးပြုရန် Pin Code ပါဝင်သော Recharge Card ကိုထပ်မံ ၀ယ်ယူရပါမည်။
အဆင့် (၁) ။ ။ User များသည် မိမိတို့ ၏ Account No. နှင့် Password ကို Softphone ၏ Username နှင့် Password နေရာများတွင် ဖြည့်သွင်းပြီး Login ၀င်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၂) ။ ။ User များသည် မိမိတို့ ၀ယ်ယူထားသော Recharge Card မှ Pin Code No. ကို http://voip.yatanarpon.com.mm ၏ Recharge via Voucher Card သို့ သွားရောက်ပြီး ဖြည့်သွင်းမှသာ ဖုန်းစတင် ခေါ်ဆို နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်
Posted by SLIP at 5:09 AM0comments
ဒီ application လေးကိုသုံးစွဲဖို့ မိမိရဲ့ဖုန်းကို အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်တစ်ခုခု (Wifi,3G..)နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရပါမယ်။ လိုအပ်တဲ့ဆော့ဝဲဖြစ်တဲ့ Viber ကိုအောက်မှာရယူလိုက်ပါ။
(မိမိတို့ဖုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ application ကိုရွေးချယ်ရယူပါ)
download ရယူပြီးပြီဆိုရင်တော့ Viber ဆော့ဝဲကိုဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ပါ။ ပြီးရင် Viber ဆော့ဝဲကိုဖွင့်ပါ။ နိုင်ငံ ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဆိုရင်
Myanmar (+95) ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။ အောက်က TextBox မှာ မိမိရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပါ။ ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရာမှာ (ဥပမာ) မိမိရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က 09-2016878 ဆိုရင်
ရှေ့ဆုံးက သုည ကိုဖြုတ်ပြီး9ကနေစထည့်ပါ။ (ဥပမာ- 92016878) ။ ပြီးရင် Continue ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်ပုံအတိုင်းပါ။
ဖုန်းစတင်ပြော၊ Message စပို့လို့ရပါပြီ။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့သူငယ်ချင်းဆီမှာလည်း Viber ဆော့ဝဲသွင်းထားပြီး အခုလုပ်ခဲ့သလို Setup လုပ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် သူ့နံပါတ်ကို Viber ထဲမှာ Invite လုပ်ပြီး ဖုန်းခေါ်ရုံပါပဲ။အင်တာနက်ဖိုးအနည်းငယ်သာကုန်မှာဖြစ်ပြီး ဖုန်းခမကုန်ဘဲ ကြိုက်သလောက်ပြော ၊ ကြိုက်သလောက် message ပို့လို့ရပြီပေါ့။ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက သူတင်မဟုတ်ဘူး ၊နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းပြောလို့ရပြီပေါ့နော်။ အားလုံး အဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by SLIP at 5:00 AM4comments
Net Cut 2.0 ဗားရှင်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံးတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက်ပေါ့ သူများအတွက်တော့သိပ်မကောင်း
ဘူး...သူကဆိုင်က Network တွေကို ဖျတ်ပေးတယ် ကိုယ်စက် ဆီရောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်ပြောရရင်တော့သူများ Network ကိုပေး
ထားတဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကို မသိမသာလေးယူသုံးတာပေ့ါ သူများကတော့ကွန်နက်ရှင်ကျကိုယ်ကတော့ကွန်နက်ရှင်တက်ပေါ့
ဆောဝဲလေးသုံးပြီး ကလိကြည့်ပေါ့ နောက်နေ့ ကျနော် Anti Net Cut ဆိုတာလေးကိုထပ်တင်ပေးပါ့မယ် အဲ့ဒါကတော့ ကိုယ်စက်ကို လုပ်လို့မရအောင်ကာကွယ်တာပေါ့ :)
Posted by SLIP at 4:58 AM2comments
Laptop Battery Power ကို ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် နည်းလမ်း
Laptop Computer ကို အသုံးပြုတဲ့သူ များတဲ့အကြောင်းကတော့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို အချိန်မရွေး Power Supply နဲ့ဆက်သွယ်စရာမလိုပဲ အသုံးပြုနိုင်လို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ Laptop နဲ့တခြား Mobile Device တွေရဲ့ အကြီးမားဆုံး ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ပြဿနာကတော့ လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာအထိ Battery Power က မပေးစွမ်းနိုင်တာပါပဲ…
ဒီတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စွမ်းအားပြည့်နဲ့Battery Power ကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်…
အကောင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းကတော့ လွမ်းတို့အသုံးပြုတဲ့ Operating System တွေမှာ Power Management Function တွေ ထည့်လာတာပါပဲ…
ခုနောက်ဆုံး အသုံးပြုနေကြတဲ့ Windows7မှာဆိုရင် Power Saver တွေ ပါလာတာကို တွေ့ ကြရမှာပါ…
အလိုအလျောက် LCD Brightness ကို လျှော့ချပေးတယ်…
CPU Clock Speed ကို နှေးကျသွားစေတယ်…
Laptop ကို အသုံးမပြုတဲ့အချိန်မှာ Hard disk operation ကို ရပ်ထားပေးတယ်…
Laptop က Idle State ဖြစ်နေရင် LCD Disply ကို Switch off လုပ်ထားပေးတယ်…
တကယ်လို့ များ ကိုယ့် Laptop ရဲ့ Batttery Power ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
၁။ Use only the necessary applications
စာတွေပြင်တာ၊ ဇယားတွေဆွဲတာ၊ Mail တွေစစ်တာလောက်ကတော့ Starcraft II Game ကစားတာမျိုးနဲ့high-definition Video တွေကြည့်တာလောက် Power မကုန်ပါဘူး… အသုံးမပြုတဲ့ Application တွေကို ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်…
၂။ Dim the monitor’s LCD brightness as much as possible
Cooling Fan နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ CPU က ဒီလောက် Power consumption မရှိပေမဲ့ အများဆုံး Power consumption ယူထားတဲ့ LCD ရဲ့ Brightness ကို လျှော့ချထားတာဟာလဲ Battery Power ကို ကြာရှည်သုံးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်…
၃။ Keep the laptop’s temperature as low as possible
Laptop မှာ Internal temperature sensors နဲ့cooling fan ကို အလုပ်လုပ်စေတာပါ… မိမိရဲ့ Laptop ကို လေ၀င်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုပြီး Laptop ကို အေးအောင်ထားနိုင်တဲ့ အခြေအနေဆိုရင် cooling fan ရဲ့ လည်ပတ်အားလျော့ကျသွားစေနိုင်တဲ့အတွက် Power consumption ကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်…
၄။ Use earpieces instead of the laptop’s in-built speaker
Speaker က Battery က Power ကို ယူထားတာပါ… အသံပိုကျယ်လေ Power ပိုကုန်လေပါပဲ… ဒီတော့ Speaker အစား earpieces ကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်…
၅။ Remove any unused USB devices from the laptop
USB Port တစ်ခုဟာ 5V DC Power ကို ယူထားတာပါ… ဒါကြောင့် မလိုအပ်တဲ့ Thumb Drive နဲ့External Hard Disk တွေကို USB Port မှာ ထည့်မထားသင့်ပါဘူး…
၆။ If you are leaving your computer idle for more than 10 minutes, hibernate it instead of leaving it in the sleep mode
Windows7မှာဆိုရင် Sleep နဲ့Hibernate ဆိုပြီး ၂-မျိုးရှိပါတယ်… Hibernation ဆိုတာ Hard disk ထဲမှာရှိတဲ့ Computer state ကို သိမ်းပြီး Computer ကို လုံးဝပိတ်ပေးသွားမှာပါ… Sleep ကတော့ system state ကို ကာကွယ်ဖို့ နဲ့memory content alive ဖြစ်နေတဲ့အတွက် Battery power ကို ယူထားရတာပါ… ဒါကြောင့် ၁၀-မိနစ်ထက် ပိုပြီး Laptop ကို အသုံးမပြုဘူးဆိုရင်တော့ Hibernate လုပ်ထားရပါမယ်…
၇။ Make use of the latest power saving technologies if they are available in your laptop
အကောင်းဆုံးဥပမာအနေနဲ့Dual Graphics Card အသုံးပြုတဲ့ Laptop တွေ အသုံးပြုဖို့ ပါ… Integrated Graphics Card တွေဟာ Power consumption နည်းလို့ပါပဲ… နောက်တစ်ခုက LCD Display ရဲ့ Brightness ကို ချိန်ညှိပေးနိုင်တဲ့ Light sensor ပါတဲ့ Laptop တွေကို အသုံးပြုသင့်တာပါ…
Posted by SLIP at 10:59 PM0comments
gmail ကနေ လာမယ့်အချိန်တခု(ဥပမာ-မနက်ဖန်)ကို ကြိုတင်ပြီး မေးလ်ပို့ချင်ရင်
ကျွန်တော်တို့ gmail ကနေ မေးလ်တွေပို့တဲ့အခါ မေးလ်က ချက်ချင်းရောက်သွားပါတယ်။အခုနည်းလေးက အဲလို ချက်ချင်းမရောက်စေဘဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အချိန် ရက် နာရီမိနစ်အတိအကျမှာ ရောက်ရှိစေမယ့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ မနက်ဖန် ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့ဆိုပါတော့...ကိုယ်ကမနက်ဖန်မှာ မနက်ပိုင်းက မအားဘူး။စာကိုလဲကြိုမပို့ချင်ဘူး။
သူအသုံးပြုနိုင်တဲ့အချိန်ကျမှ ပို့ချင်တယ် အဲ့အခါမျိုးမှာ အခုနည်းလေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ပုံလုပ်နည်းက ပထမဆုံးအနေနဲ့ အောက်ကလင့်လေးကိုသွားပြီး install လုပ်လိုက်ပါ။
install boomerang ဆိုတဲ့အနီရောင်လေးကို ကလစ်ပေးလိုက်ပါ။allow>install>restart firefox အဆင့်ဆင့်လုပ်သွားလိုက်ပါ။
ပထမဆုံးကိုယ့်gmail ကို ၀င်လိုက်ပါ။ပြီးရင် compose mail ကနေ ပုံမှန်အတိုင်းကိုယ်ပို့ချင်တဲ့သူဆီ နာမည်ရေးပြီး ရေးချင်တာရေးလိုက်ပါ။
အားလုံးရေးပြီးပီဆိုရင် ပုံထဲကအတိုင်း send later ကို နိုပ်လိုက်ပါ။ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့အချိန် ရွေးပေးပါ။အချိန်အတိအကျပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရက်စွဲ အချိန်သေချာဖြည့်ပြီးလဲ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ပြီးရင် Confirm လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ပထမဆုံးအကြိမ်မှာ စာတခုတက်ပါမယ်။ Allow လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့မေးလ်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ သင့်မိတ်ဆွေဆီ ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ပို့လိုက်တဲ့စာကို စစ်ဆေးချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ဖျက်ချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် အချိန်ပြန်လည်သတ်မှတ်ချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်
Manage scheduled messages ကနေ ၀င်ရောက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ boomerang ကို ပထမဆုံးအသုံးပြုတဲ့လမှာ တစ်လတိတိ အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
နောက်လများမှာတော့ basic plan အနေနဲ့ တစ်လကို ဆယ်စောင်ပို့ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ပိုမိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Buyasubscription ကနေ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Referafriend ကနေ သူငယ်ချင်းဖိတ်ခေါ်ပေးရင် တခြားအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တော့ ချစ်သူဆီကို စမ်းပို့ပြီးပီ။ကျွန်တော်အိပ်နေတဲ့အချိန် မေးလ်ဝင်လာလို့ ချစ်သူကအံ့သြသွားတယ်ခင်ဗျ။ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားတယ်။သူငယ်ချင်းတို့လဲ စမ်းသပ်ကြည့်နော်။
မြန်မာနိုင်ငံကတော့ အဆင်ပြေရဲ့လား သေချာမသိပါဘူး။စမ်းကြည့်ပေါ့နော် အလကားရတာဘဲ ဟုတ်ဖူးလား...
Posted by SLIP at 10:55 PM0comments
Labels: Email ကြိုပို့ထားလိုလျှင်
ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ အရမ်းကို၇ိုးရှင်းပါတယ်...MS-DOS ကိုသုံးပြီး သင့်ရဲ့ ကျောင်းnetwork ၊ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ပြောလို့ရပါတယ်...............
ပထမဆုံးလိုတာကတော့.........မိမိပြောချင်တဲ့သူ့ရဲ့ network ip address ကိုသိမှဖြစ်ပါမယ်........ip address ကို သိအောင် အရင်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်..................ပြီးရင်တော့. notepad ကို ဖွင့်ပြီး ဒီ batch programming code တွေကို ကူးထည့်လိုက်ပါ
ကူးထည့်ပြီးပြီဆို၇င်တော့ ......file nameကို messenger.bat လို့်သိမ်းပေးလိုက်ပါ သိမ်းပြီးပြီဆိုရင်တော့......အဲဒီဖိုင်လေးကို ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ.........အဲဒါဆိုရင် ipaddress ဆိုတဲ့နေရာဘေးမှာ မိမိ ပြောချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ ipကို ၇ိုက်ပါ..ပြီးရင် enter...........message ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ မိမိပြောချင်တာ၇ိုက်ပါ english လိုပဲ ၇ိုက်လို့၇ပါတယ်................ပြီးရင်တော့ enter ၇ိုက်လိုက်ပါ ဒါဆို၇င် မိမိပြောချင်တဲ့ message က မိမိသူငယ်ချင်းရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာသွားပေါ်ပါလိမ့်မယ်...............ပုံလေးတွေလည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ် .........အနီနဲ့ထားတဲ့နေရာမှာ မိမိကြိုက်သလို ၇ိုက်နိူင်ပါတယ်.........ဥပမာ: ipaddress or user လို့၇ိုက်နိူင်ပါတယ်............
Posted by SLIP at 10:51 PM0comments
Labels: Chat in MS-DOS using IP address